ALT နှင့် TAB တို့၏စွမ်းအား | Martech Zone
ALT နှင့် TAB ၏စွမ်းအား
ကြာသပတေးနေ့, မတ်လ 25, 2010 တနင်္လာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 1, 2018 ရောဘတ်ကွပ်မျက်
ကွန်ပျူတာနည်းပညာနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်သင်၏ကီးဘုတ်ပေါ်ရှိအရေးအပါဆုံးခလုတ်နှစ်ခုနှင့်လူမည်မျှရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိကြောင်းကျွန်ုပ်အံ့သြမိသည်။ ALT နှင့် TAB ၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်စွမ်းအားသည်ကွန်ပျူတာကိုစီးပွားရေးမြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသူမည်သူမဆိုအတွက်အရေးကြီးဆုံးကုန်ထုတ်စွမ်းအားအကြံပေးချက်များဖြစ်သည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် Martech ဖတ်နေသည့်လူတိုင်းနီးပါး!
ALT + TAB ပေါင်းစပ်မှုကိုအမှန်တကယ်နားလည်ရန် ALT key ကိုစတင်ဆွေးနွေးရန်လိုသည်။ သင်“ ALT” သည်“ alternate” အတွက်တိုတောင်းကြောင်းသင်သိကောင်းသိလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာဤသေးငယ်သောခလုတ်သည်လက်ရှိအသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်၏လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲရန်ရည်ရွယ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်ကွန်ပျူတာ wizards များကို“ switching mode” ဟုခေါ်ကြသည်။ “ ALT” ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းသည်စက်ကိုပြုမူရန်ပြောစေသည် လုံးဝကွဲပြားခြားနားသည် လက်ရှိပြုလုပ်နေသည်ထက်
ဤသည်အလွန်အမင်းထင်ရပေမည်။ ပြီးနောက်၊ SHIFT key သည်ပထမတစ်ချက်မှာအခြေခံအားဖြင့်အတူတူလုပ်ဟန်ရှိသည်။ သို့သော် SHIFT သည်စာလုံးအကြီးများမှစာလုံးအသေးများကိုသာပြောင်းသည်။ “ A” သည်“ a” နှင့်အခြေခံအားဖြင့်တူညီသည်။ တကယ်တော့စာစီစာရိုက်သူဟောင်းတွေဟာတကယ်တမ်းမှာစာနှစ်စောင်စလုံးပါခဲ့တယ်။ “ ALT” သော့သည်သင်၏စက်ကိုကမ္ဘာသစ်သို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။
အဆိုပါလူပျို ALT + TAB
ALT ကိုထိသောအခါဘာမှမဖြစ်သကဲ့သို့ဖြစ်ပုံရသည်။ သော့ကိုတစ်ဒါဇင်ခေါက် နှိပ်၍ ဖြန့်ချိပါက Windows သို့မဟုတ် Mac စက်များကတုန့်ပြန်မည်မဟုတ်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည် ALT ခလုတ်ကိုဖိထားပြီးနောက်သို့ ဖြတ်၍ TAB ခလုတ်ကိုတစ်စက္ကန့်သာနှိပ်ပြီး TAB ခလုတ်ကိုလွှတ်လျှင်သင်ပြတင်းပေါက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်တက်ကြွသောအသုံးချပရိုဂရမ်များအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုလိမ့်မည်။ သင်စာရင်းရှိနောက်တစ်ခုကိုမီးမောင်းထိုးပြထားသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ALT ကိုလွှတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီ program ကိုချက်ချင်းပြောင်းသွားလိမ့်မယ်။
ALT + TAB တစ်ခုတည်း၏စွမ်းအားသည်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကိုကြီးမားစေသည်။ ပွင့်လင်းတဲ့ application နှစ်ခုအကြားပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုရင် keyboard ကိုလက်နဲ့မောက်ကိုရွှေ့ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ သွားစမ်းပါ။ ALT + TAB မည်သို့ခံစားရသည်ကိုသိရှိရန်မိနစ်အနည်းငယ်အချိန်ယူပါ။
အကယ်၍ သင်သည် ALT + TAB တစ်ခုတည်းကိုအနီးကပ်အာရုံစိုက်မည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်အမှန်တကယ်အကြားပြောင်းလဲသည်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည် ယခု လျှောက်လွှာနှင့် နောက်ဆုံးအသုံးပြုခဲ့သည် လျှောက်လွှာ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် web မှ browser မှ ALT + TAB နှင့်စကားပြောပရိုဆက်ဆာသို့ပြောင်းပါကသင်ပြောင်းနိုင်သည် ပြန်. အခြား ALT + TAB နှင့်အတူ။ ဒီအလှည့်အပြောင်းတွေအားလုံးဟာအချိန်ဖြုန်းတီးသလိုပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ် တိကျစွာ ကျနော်တို့သုတေသနနှင့်ရေးသားခြင်းအခါငါတို့ရှိသမျှသည်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကို။ ALT + TAB သည်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းအသွားအလာအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
စက္ကန့်အနည်းငယ်လောက်သိမ်းဆည်းထားခြင်းအားဖြင့်သင်၏လက်ကို mouse ကိုရှေ့သို့ရွေ့ပြောင်းခြင်းကသိပ်ပြီးမလွယ်ဘူး။ တစ်နာရီကိုရာနဲ့ချီတဲ့ခလုတ်တွေကိုမြှောက်ပါ။ သင်၏အရံအမြင်အာရုံဖြင့်မောက်စ်ကိုရှာဖွေပြီး cursor ကိုမျက်နှာပြင်အောက်ခြေသို့ပြန်ဆွဲယူသည့်အခါခဏတာအာရုံပျောက်သွားနိုင်သည်ဟုစဉ်းစားပါ။ တစ်ခုတည်းသော ALT + TAB ကိုကျွမ်းကျင်ခြင်းသည်သင်၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုများစွာပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်။
အဆင့်မြင့် ALT + TAB
အခြေခံတွေထက်အများကြီးပိုပါတယ်။ ALT + TAB ကိုနှိပ်ပြီး ALT ခလုတ်ကိုနှိပ်လျှင် active applications ၏ icon များကိုတွေ့လိမ့်မည်။ သင်ယခင်ကအသုံးပြုခဲ့သောပရိုဂရမ်များသို့ပြန်ဝိုင်းရန် TAB ခလုတ်ကိုထပ်ခါတလဲလဲသုံးနိုင်သည်။ SHIFT + TAB ၏ပေါင်းစပ်မှုသည်ဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းကြောင်းသို့သွားသည်။
အကယ်၍ သင်သည်ပရိုဂရမ်တစ်ခုမှတစ်ခုနှင့်တစ်ခု keystrokes ဖြင့်အချက်အလက်များကိုကူးယူနေသည်ကိုသင်သတိပြုမိပါက ALT + TAB သည်သင်၏အတွေ့အကြုံကိုအသုံးပြုခြင်းတွင်ပြုလုပ်နိုင်သည် သာ ကီးဘုတ်။ ဤသည်သိသိသာသာကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်မှုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
ALT + TAB ကိုလေ့လာရန်အချိန်အနည်းငယ်ယူပါ။ သငျသညျစက်နှင့်အတူပိုမိုမြန်ဆန်ခြင်းနှင့်ပိုပြီးအလုပ်အမှုကိုပြုရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ ALT ကဲ့သို့သော့များသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်သည်ကိုအသိအမှတ်ပြုပါ mode ကိုပြောင်းလဲနေတဲ့ ငါတို့ပတ်လည်စနစ်များ၏။ ALT သည်သင်၏စားပွဲခုံတွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖုန်းပြောခြင်းနှင့်ကွာခြားသည်။ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောပြည်နယ်သို့ပြောင်းခြင်းအကြောင်းပါ။
context-switching ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအတွက်အကြီးမားဆုံးကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြတ်တောက်မှုတိုင်းသည်သင်ဘာလုပ်နေသည်ကိုမေ့သွားစေသည်။ Keyboard ကနေမောက်စ်ကိုပြောင်းရင်တောင်သင်အာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတာတွက်ကြည့်ပါ။ သင်၏လုပ်ငန်းအသွားအလာသည်ပိုမိုချောမွေ့ပြီးသင်ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
Tags: alt tagလက်နှိပ်စက်
မတ်လ 25, 2010 မှာ 4: 32 pm တွင်
တစ်ခါကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ကငါ့ကို 'mouse cripple' လို့ခေါ်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါကအမြဲတမ်း graphical user interface ကိုသုံးပြီးသွားခဲ့တယ်။ key shortcuts များသည်မည်မျှထိရောက်သည်ကိုကျွန်ုပ်မစဉ်းစားမီနှစ်အနည်းငယ်ကြာပါသည်။ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတာက Mac အသုံးပြုသူများသည်ကြီးကျယ်တဲ့အရာများပြုလုပ်သည့်စိတ်ကြိုက်ခလုတ်ခုံများဖြင့်အမြဲဆုချခံရသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ၀ င်းဒိုးသည်အမီလိုက်သည် - သို့သော်မက်ခ်များရှိသူငယ်ချင်းအများစုသည်ဖြတ်လမ်းများအားလုံးကိုသိရှိခြင်းသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားကြသည်။ သူတို့၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကပြသသည်။
Nourhan Seif အယ်လ် Nasr
16:2012 pm မှာနိုဝင်ဘာ 6, 03